သင်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ နေရာက ကျဉ်းနေလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား? - Phoenix Emperor
Home / Blog / သင်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ နေရာက ကျဉ်းနေလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား?
သင်နေတဲ့အခန်းက ကျဉ်းနေသေးလို့ အလှဆင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရခက်နေရင်တော့ ဒီ idea လေးတွေကိုလေ့လာပြီးပြင်ဆင်လို့ ရတယ်နော်။
မိမိနှစ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံ ပိုစတာစတာတွေကို အခန်းနံရံမှာချိတ်တာ နံရံကပ်စင်လေးတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာလဲ စာအုပ် ပန်းအိုး နဲ့အခြား accessories လေးတွေတင်လို့ရသလို သပ်သပ်ရပ်နဲ့အမြင်ဆန်းသစ်စေပါတယ်။အရုပ်လေးတွေ ချစ်တဲ့လူဆိုရင်လဲ အရုပ်လေးတွေထားလို့ရသေးတယ်နော်။
မိမိနေထိုင်ရာအခန်းတွင် မိမိနှစ်သက်ရာ အရောင်လေးတွေ ခြယ်သခြင်းဟာလဲ စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်မှာပါ။မိမိအခန်းနံရံသာမကပဲ မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ စားပွဲ မှန်တင်ခုံ ဗီရို စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆေးရောင်လှလှချယ်ခြင်း ဖြင့်လဲ အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ မိမိပစ္စည်းတွေကိုသစ်လွင်စေပြီးအမြင်လဲဆန်းသစ်စေလို့ကောင်းမွန်တဲ့ idea လေးဖြစ်ပါတယ်။Graffiti တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့လည်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံတွေဆွဲထားပြီးကြည့်နေရခြင်းကလဲ စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုကို ခံစားရရှိစေပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကို လေ့လာစမ်းသပ် ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာ အိမ်၊တိုက်ခန်းဟာကျဉ်းနေပါသော်လည်းမိမိ၏ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှုတွေကို အနည်းငယ်တော့ လျော့နည်းသွားစေမှာပါ။ အဓိက အချက်ကတော့ ပစ္စည်းများကိုသေသေသပ်သပ်နှင့်စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထားတတ်ဖို့ပါပဲ အခန်းကလဲ ကျဉ်းနေမယ် ပစ္စည်းများလည်းနေရာမကျရှုပ်ပွနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အခန်းကိုပိုကျဉ်းသယောင်ဖြစ်စေပြီး စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ရမှာပါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့နေရာဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ရခြင်းဟာမိမိရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင် စေရုံသာမကကျန်းမာရေးနဲ့လဲညီညွတ်တာကြောင့် အခန်းကိုသပ်ရပ်သန့်ရှင်းစွာထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။